यी हुन् ए’सिड आ’क्रमणबाट घा’इते भएकी पवित्रा र ए’सिड हा’न्ने आ’क्र मणकारी – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/यी हुन् ए’सिड आ’क्रमणबाट घा’इते भएकी पवित्रा र ए’सिड हा’न्ने आ’क्र मणकारी
यी हुन् ए’सिड आ’क्रमणबाट घा’इते भएकी पवित्रा र ए’सिड हा’न्ने आ’क्र मणकारी
काठमाडौं : राजधानीको सीतापाइलामा एकजना युवतीमाथि ते’जाव हा’न्‍ने दुईजनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार साँझ सीतापाइलामा ओखलढुंगा घर भएकी २२ वर्षीया पवित्रा कार्कीमाथि ते’जाव हा’नेर फ’रार भएका दुवैजना लाई पक्राउ गरी महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा सार्वजनिक गरिएको हो।
काठमाडौं परिसर र महानगरीय अ’पराध अनुसन्धान महाशाखाको संयुक्त टो’लीले उनीहरुलाई डल्लुबाट पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ पर्नेमा रौतहटको लक्ष्मीपुर घर भई हाल डल्लु बस्‍ने मो’हम्मद आ’लम र भारत घर भई डल्लुमा कालीगढको काम गर्ने मु’न्‍ना मो’हम्मद छन्।
उनीहरु बिहीबार राति ११ बजे डल्लुबाट पक्राउ परेको महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुका प्रमुख एसएसपी श्याम ज्ञवालीले बताए। प्रहरीलाई दिएको ब’यान अनुसार आफूहरुले मन पराएकी केटीले अर्कै केटालाई मन पराएको थाहा पाएपछि ट्‍वा’इलेट–बा’थरुम सफा गर्ने ए’सिड प्र’हार गरेको बताएका छन् । ते’जावले अनुहार ज’लेको अवस्थामा युवतीलाई राति नै कीर्तिपुर अस्पताल लगिएको थियो ।
पुजारी ह’त्याको विरो’ध गर्नेलाई कारबा.ही गर्न गृहको निर्देशन
कोरोनाका बिरामी ब`ढ्दै गएपछि आजबाट सरकारले जारि गर्यो ७७ जिल्लामा यस्तो सूचना, घरबाहिर ननिस्कनु होला !
बिहेको दुई महिना नबित्दै श्रीमती पहिलेको बोयफ्रेन्डसङ्ग टाप ! २५ लाख सम्पत्तिसहित हिंडेको आ’रोप ? (भिडियो सहित)